Shiinaha bushimaha jumlada ah ee loo yaqaan 'logo' jumlada jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ee calaamadaha gaarka loo leeyahay ee lipstick low moq makeup bush factory iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Iris
bushimaha jumlada ah ee loo yaqaan 'logo' jumlada jilicsan ee jilicsan ee calaamadda khaaska ah ee lipstick low moq makeup bush
Lip stick is must-have makeup in your nolol maalmeedka, taas oo u iftiimin kara midabka maqaarkaaga. Dibnahayagu wuxuu ku dheggan yahay nal qafiif ah oo qoyan, soo bandhig saameynta qallalan ee ceeryaanta, dibnaha u qoy waqti isku mid ah, bushimahaaga ka dhig mid dhalaalaya oo dhaqaaq badan. Mid kasta oo ku habboon midabbada maqaarka ee kala duwan iyo qurxinta ayaa si fiican u muuqda. Mid soo qaado hada oo abuur quruxdaada shaqsiyeed.
* Sii 65 daahyo ah xulashadaada, la kulan dalabkaaga midabada kala duwan.
* Ku darso bushimahaaga midab dhalaalaya, adiga oo abuuraya qurxiyo muddo dheer soconaya kana dhigaya bushimahaaga kuwo soo jiidasho leh.
* Ku kobci fitamiin E iyo cunsurka, bushimahaaga ka dhig mid qoyan oo jilicsan.
* Dusha sare ee jilicsan ee jilicsan, isticmaal saliid saytuun ah ama soo saar saliida qurxinta si aad uga saarto.
* Cabbirka is haysta iyo naqshad fudud, fudud oo la qaadi karo oo la isticmaali karo, qurxinta quruxdaada waqti kasta ama meel kasta.
Hore: Calaamadaha qaawan ee bushimaha dhalaalaya ee khaaska ah cawrada veggolka dhalaalaya ee qaawan iyo naxariis la’aanta dhalaalaya bushqad qaawan
Xiga: Dheecaannada dareeraha ah iyo kuwa liner-biyoodka ah waxay dejiyaan jumlada liner-biyoodka caadada ah iyo bushimaha dhalaalaya ee loo dejiyo xirmada bushimaha matte calaamadda khaaska ah ee lipstick
habee usha dibnaha
bushimaha tayo sare leh ayaa ku dhega
Matte bushqad calaamadda gaarka loo leeyahay
calaamadda khaaska ah ee bushimaha hoose moq
bushimaha jilicsan ee jilicsan
bushimaha jumlada jumlada astaanta u ah astaanta vegan